Yakazara keyboard pane iyo nyowani skrini yeApple Watch Series 7 | IPhone nhau
Yakazara keyboard pane itsva skrini yeApple Watch Series 7
Chimwe chezvikamu zvakanaka zvekuve neakakura skrini paApple Watch ndechekuti zvinotibvumidza kunakidzwa nekhibhodi yakazara pane wachi. Iyi sarudzo yaisazogoneka pasina kukura kwescreen yakawanikwa neApple uye ndiko mune yazvino mamodheru isu hatine yakazara keyboard yekunyora asi inoitwa mune aya mamodheru matsva.
Chidzitiro chakakura chinotsigirawo makumi mashanu% zvinyorwa sezvakaratidzwa muhurukuro, chimwe chinhu vashandisi vanogamuchira yakawanda mameseji kana maemail pasina mubvunzo vanozokoshesa. Muchidimbu, chinhu chakakosha apa ndechekuti saizi yakaenzana yeiyo wachi yekutarisa uye seti yayo haina kuwedzera chero chinhu, chinokura ndicho chidzitiro.
Iyo keyboard inobvumidza iwe kushandisa iyo Quickpath basa
Ivo zvakare vanowedzera iyo sarudzo inonzi naApple seKurumidza, iyo isiri chimwe chinhu kunze kwesarudzo yekutaipa nekutsvedza pabhobhoyo pachayo. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti iri idzva rakasarudzika basa reChikamu 7 rinoshandisa huchenjeri hwekunyepedzera kudzidza mazwi uye nekudaro pese paunoshandisa chichava nyore kunyora nekutsvedza, Kunge iPhone nhasi.
Nechi skrini chitsva ichi chihombe chinobva pa41mm kusvika pa45mm yemhando hombe, hazvizotipe chero chinhu kudhirowa mavara kunyangwe tiine zvigunwe zvikuru. Iwo mabhatani ekudyidzana uye iwo maratidziro mune akawandisa akagadzirwazve kuti ashandiswe mune ino nyowani wachi iyo yenguva iyo isu tichakamirira kuchengetedza. Zvinonzi zvinogona kunonoka kudonha uku kunyangwe asi hapana chinhu chakasimbiswa naApple saka ichave iri nguva yekuenderera mberi uchimirira mune izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yakazara keyboard pane itsva skrini yeApple Watch Series 7
Izvo zvaive zvatokwanisika nevekunze app, ivo vakaivhota uye ikozvino vanoisanganisira chete kune chete wachi 7. Sei zvakanaka unoenda apuro.
Iyo nyowani iPhone 13 inoratidzira mbiri eSIM rutsigiro